Archive du 17-sept-2021
Oniversiten’i Fianarantsoa Niakatra ny daozin’ny grevy
Nangotraka indray ny grevy tao amin’ny Oniversiten’I Fianarantsoa omaly alakamisy 16 septambra 2021. Niverina nitokona ireo mpandraharaha eo anivon’ny anjerimanontolo na ny PAT (Personnel Administratif et Technique)
Kitra, filaharan’ny FIFA Very toerana telo ny Barea
Very toerana miisa 3 ny Barean’i Madagasikara eo amin’ny filaharana maneran-tany eo amin’ny sehatry ny baolina kitra. Navoakan’ny FIFA omaly alakamisy izany,
Asa sy fihariana Miroborobo ny resaka zaitra
Niroborobo sy nahazo vahana teto amintsika ny resaka zaitra hatramin’ny nisian’ny valan’aretina Covid 19 ka niteraka ny fihibohana teto amintsika.
Ministeran’ny mponina Tratry ny ampamoaka sahady ny tale jeneraly vaovao
Ny eo tsy milamina, ny eo mitsikafona ihany! Ny ampitso marainan’ny nanendrena azy tamin’ny alalan’ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo ho Tale Jeneralin’ny Ministeran’ny mponina Rtoa Andriatsimilao Ando Firaisantsoa,
Sekoly ambony Polyteknikan’Antsiranana “Ny mpianatra antsoina, ny trano tsy misy”
Velon-taraina ireo mpianatra avy lavitra. Misy ny afaka bakalorea tamin’ny 2020. Nanao fifaninanana hidirana any amin’ny Sekoly ambony Polyteknika Antsiranana.
«Salon de l’Etudiant et de l’Emploi » Hisy atrikasa, valandresaka sy adihevitra, fandraisana CV
Andro sisa isaina, dia higadona ny andron’ny 20-22 septambra 2021 hanatanterahana ny « Salon de l’Etudiant et de l’Emploi » andiany faha-3 etsy amin’ny Tokontanin’ny TVM-RNM Anosy.
Vary safiotra Mahatratra 12 taonina isaky ny hektara ny vokatra
Araka ny fanazavan’ny vondron’orinasa mpisehatra eo amin’ny vary safiotra na “hybride”, STOI, tetsy amin’ny foara iraisampirenena Malagasy na FIM tetsy Tanjombato omaly,
Vokatry ny valan’aretina Covid 19 Maro ireo sekoly ambony no nanova paikady
Efa saika mihetsiketsika avokoa ny ankamaroan’ireo sekoly ambony eto amintsika amin’izao taorian’ny nivoahan’ny voka-panadinana Bakalorea.
Asa tànana sy vokatra sy Malagasy Raikitra ny fampirantiana “Made in Madagascar”
Nisokatra omaly tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina ary tsy hifarana raha tsy ny alahady 20 septambra izao ny varotra fampiratiana nomena ny lohahevitra “Made in Madagascar”
"Cité des métiers" Ivato Natokana ho an'ny asa-tànana Malagasy
Nankatoavina nandritry ny filakan-kevitry ny minisitra tamin’ny alarobia 15 septambra teo ny hanamboaran'ny Ministeran’ny Asa-tànana sy ny Hai-tao,
Nanazava ny Ethiopian Airlines “Nanatanteraka ny toromariky ny fanjakana izahay…”
Malagasy 2, karana 5 saika ho any Dubai no noahiahiana ho nikotrika trafikana volamena teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato alarobia lasa teo.
Ady an-tranon’ny mpitondra Voaozongozona hatramin’ny tarehimarika 13
Hatramin’ny 15 aogositra teo ka hatramin’izao, izany hoe, 1 volana sy 2 andro taty aoriana dia tsy nitsahatra nivoaka ny dosie mikasika ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny governemanta sy olona ambon
Hopitaly Befelatanana Ramatoa roa marary tsy misy mpanampy
Ramatoa roa marary mafy no fantatra fa tsy misy mpiahy ao amin'ny hopitaly Befelatanana. Kohadavareny sy aretim-po no mahazo azy ireo hoy ny vaovao.
Minisitra Lalatiana mivady Ny mpomba ny fitondrana aza mandetika azy ireo
Anjaran’ny tompon’andraikitra mahefa ny mijery ny hitantanana ny raharaha momba ny Minisitry ny serasera sy ny Kolontsaina Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy mivady,
Fahasahiranan’ny ray aman-dreny ao Bongatsara Hiantoka fianarana mpianatra miisa 10 ny TMA
Mpianatra miisa 10 no saika nijanona tsy hianatra intsony noho ny fahasahiranana mianjady amin'ny ray aman-dreny ankehitriny ao amin'ny sekoly iray ao Bongatsara.